Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0112 zom
Samy manana ny hiafarany
Zoma 05 Okt.
Vakio ny “The Great Controversy,” tt. 969-1008 nosoratan’i Frank B. Holbrook, ao amin’ny HSDAT.
“Ny Baiboly ihany no maneho ny tenany. Natao hampitahaina amin’ny Soratra Masina ihany ny Soratra Masina. Ny mpianatra dia tokony hianatra hijery an-kapobeny ny tenin’Andriamanitra ka hijery ny fifandraisana misy eo amin’ny fizarazarany rehetra. Tokony hofantariny ny tena votoatin-dresaka ao anatiny, ny zava-kendren’Andriamanitra ho an’izao tontolo izao tany am-boalohany, ny nipoiran’ny ady lehibe ifanaovan’i Kristy sy i Satana ary ny asam-panavotana. Tokony ho takany ny toetoetr’ireo fitsipika anankiroa izay mifanandrina mba hahazo ny toerana ambony indrindra, ary tokony hianarany ny mamantatra ny fiasan’izy ireo manerana ny tantara sy ny faminaniana voarakitra, ka hatrany amin’ny fihafarany. Tokony hojereny ny fomba fidiran’izany any anatin’ireo dingana rehetra eo amin’ny fanandraman’olombelona; ny fomba anehoan’izy tenany mihitsy eo amin’ny lafim-piainany rehetra ny fikasan’ny andaniny na ny ankilany amin’ireo hery roa mifanandrina ireo; ary ny fomba handraisany fanapahan-kevitra amin’izay ny amin’ny hoe hiandany amin’iza izy.” – Ed, t. 190.
1. Voalazan’i Ellen G. White ao anatin’io andalan-teny notsongaina avy tao anatin’ny boky Education eo ambony io fa tafiditra ao anatin’ireo dingan’ny fanandraman’ny olombelona rehetra ny fifanandrinan’ny tsara sy ny ratsy. Ahoana no mampitombina izany eo amin’ny fanandramanao manokana? Eo amin’ny fiatrehanao ireo olan’ny fiainana andavanandro ao anatin’ny tontolo feno ota sy fahoriana, hery sa fahadisoam-panantenana ho anao ny fahatakaranao ny lohahevitry ny fifanandrinana lehibe?
2. Milaza ny olona sasany fa “maharitra loatra” ny fiverenan’i Kristy. Eo anatrehan’ireo tsy fahamarinana sy fahoriana tsy ara-drariny manjaka eo amin’izao tontolo izao, dia toa be loatra ny andro anankiray manampy ny isan’andro. Asaivo mizara ny fomba fijeriny manokana ny mambran’ny kilasy tsirairay mikasika ny fifanandrinan’ny ratsy sy ny tsara, araka io fiheverana ny fiverenan’i Kristy ho “maharitra loatra” io.
3. Manao ahoana ny toky ananantsika momba ny zavatra hitranga farany amin’io ady ifanaovan’ny ratsy sy ny tsara io? Inona no manome antoka anao fa ho resy ny ratsy amin’ny farany? Inona avy ireo antony tokony hinoantsika an’izany? Ahoana ohatra no anomezan’ny faminanian’ny Dan. 2 toky antsika mikasika ny toe-javatra hiseho farany?
4. Ivereno jerena eo amin’ny kilasy ny valin-teninareo mikasika ny fanontaniana tamin’ny Alakamisy. Tena zava-dehibe tokoa izany valin-teny izany noho ny fahatakarantsika ireo mpanenjika any amin’ny andro farany. Ahoana àry no hahazoantsika antoka fa hiandany amin’Andriamanitra isika?